Ciidammo Itoobiyaan Ah Oo Qarax Lala Beegsaday – Ilays News
Ciidammo Itoobiyaan Ah Oo Qarax Lala Beegsaday
Moqdisho (Ilays-News):- Warrarka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee badhtamaha Soomaaliya ayaa sheegaya in qarax lala beegsaday kolonyo ciidammo Itoobiyaan ah oo marayay deegaanka Ceel Gaal oo qiyaastii 15 km bari kaga beegan magaalo madaxda gobolka ee Baladweyne.
Dad ku sugan Ceel Gaal ayaa sheegay inay maqleen qarax isla markaana ay arkeen qiiq iyo uuro hawada isku shareertay, iyagoo intaa ku daray in ciidammadii la qarxiyay ay wali fadhiyaan halkii uu qaraxu ka dhacay.
Qaraxa ayaa loo malaynayaa inuu ahaa nooca wadooyinka hareerahooda la galiyo ee meelaha fogfog laga hago.
Xarakada Al-Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada qaraxa, waxyna intaa ku dartay in ay qaraxaasi ku dishay kuna dhaawacday sodon askari.
Ma jiro war madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada Al-Shabaab, hase yeeshee dadka deegaanka ayaa sheegay inaanay garan karin khasaaraha gaaray ciidanka maadaama aan loo dhawaan karin aaga qaraxu ka dhacay oo ay ciidammadu xireen.
Wixii warrara ee ka soo kordha qaraxa iyo khasaarihiis waan idinla socod siin doonaa.